Puntland: Qoysaskii ay saameysay duufaantii Gati oo aan weli ka soo kaban dhaqaale xumadii ku dhacday - Radio Ergo
Kaydka Sawwirada /Ergo
(ERGO) – Qaar ka mid qoysaskii ay saamaysay duufaantii Gati ee bishii Noofeembar ku dhufatay deegaanka Xaafuun ee gobolka Bari ayaa wajahaya culeys dhaqaale markii ay hantidoodii iyo waxyaabahii ay ku shaqaysan jireen ay ku waayeen duufaanta.
Dadkaan ayaa dhaqaale ahaan ku tiirsanaa wax-soo saarka badda iyo xoolo dhaqashada, waxaana in badan oo ka mid ah ay noqdeen kuwo shaqo la’aan ah, welina ma aysan helin kaalmo dhaqaale oo ka caawisa in ay dib u soo kabtaan.
Xaliimo Cali Saciid oo qoyskeedu ka mid yahay dadkii ay miyiga duufaantu ku saameysay xoolihii ay u tiirsanaayeen, waxay shantii bil ee u dambeysay ku nool yihiin lacag dhan $80 oo ay bishii ka helaan eheladooda, taas oo ay ku gataan raashin ay cunaan 20 maalin. Tobanka maalin ee bisha ka hartay ayay sheegtay in wax la cunaan qoysaska ay dariska yihiin.
Qoyskaan oo toban ka kooban ayaa hadda deggan buush ay ka dhisteen magaalada Xaafuun, iyagoon helin taakulleyn dhaqaale, Xaliimo ayaa sheegtay in tan iyo markii ay yimaadeen Xaafuun ay noloshu ku adkaatay wax ay miyigii ula laabtaana aysan haysan, taasina ay welwel wayn ku hayso iyadda iyo qoyskeedda.
“Waxaannu u guurnay degmada xaafuun, dabeedna waa ku noolayn ummadaas ilaahay baanu ka mid ahayn, Wax gargaar ah oo noo gooni ah oo aanu helnay ma jirto, wax annagana na la siiyay oo noo gaar ahna ma jirto, oo anaga reer ahaan nala ku tixgeliyay oo la yiri reerihii dhibaatadu gaartay waa kuwaan ama dadkuba wax noo garteen amaba hay’aduhu noo sheegeen oo noo gudbiyeen. Marka annaguna ummadda islaameed wixii na loo heli karo wax waa u baahanahay, baahidu waa jirtaa.”
Qoyskaan oo miyigi ku dhaqanayay 200 oo neef oo ari ah, waxaa duufaanta ugga bedbaaday labaatan neef oo weli u joogga, xoolaha ayaa ahaa isha dhaqaale ee keliya oo qoyskoodu ku tiirsanaa sida aya noo sheegtay.
Axmed Guure Liibaan oo duufaantu ka burburisay saxiimaddii uu ku shaqeysan jiray, wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in doonta ay ku shaqaysan-jireen kuna tiirsanaayeen wax soo saarkeeda afar nin oo qoysas lahaa, hadda waa shaqo la’aan guriga iska joogga.
Waxa uu tilmaamay in muddo dheer isaga iyo kalluumaysatadii doomuhu ka burbureen ay codsadeen in la taakuleeyo si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda.
“Annagu muddo badan baan wax soo codsannay, intaasna waa qaylinaynay. Hadda waxaan codsanaynaa dowladdda iyo hay’aduhu ay wax na taraan oo na taakuleeyaan.”
Waxaa jira gargaar cunno iyo lacago ah oo hay’ado ay siiyeen qoysaska qaar oo duufaantu saameysay, Xaliimo iyo Axmed ayaa-se noo sheegay in gargaarkaas aysan iyagu helin.
Shukri Abshir Cabdi oo ka mid ah dadka gargaarkaas helay ayaa sheegtay in hal mar ay lacag boqol doollar ka heshay hay’adda Bisha Cas, Haweenaydaan oo reerkeedu uu ka kooban yahay afar qof, waxay ka biili jirtay meherad yar oo lagu gado shaaha, sabaayadda iyo kaluunka.
Waxay sheegtay in buushkii meheradda u ahaa iyo gurigii ay deggenaayeen ay duufaantii ka dumisay oo hadda ay deggan yihiin gurigii oo bac dusha ay ka saarteen, Lacagta la siiyay ayay sheegtay Shukri inaysan wax ka beddelin noloshiooda, welina ay guri-joog tahay.
”Wax fiican haddii lagu siin lahaa dhib maba qabtid ma ogtahay. Buushku ninka kuu dhisaaya boqol keen ama toddobaad keen buu ku dhahayaa, boqolna ma haysatid.”
Gudoomiyaha Xaafuun Maxamuud Yuusuf Garoow ayaa uu Raadiyo Ergo u sheegay in Puntland iyo hay’aduhuba qiimeyn ku sameeyeen dhibaatadii ka dhlatay duufaanti Gati.
Waxa uu tilmaamay in gargaar aan badnayn oo markii dhibaatadu dhacday la sameeyay mooyee, wax kale oo loo qabtay dadka dhibaatadu soo gaartay aysan jirin. Guddimiyaha ayaa intaas ku daray in dadkaas ay wax-u-qabasho dhab ah u baahan yihiin.
“Guddiggii golaha gurmadka ee xukuumada waa yimaadeen, hay’adaha UN-ka iyo kuwa maxaliga ah waa noo yimaadeen, dhamaanba waa la arkay dhibaatada Gati saamaynta ay ku samysay deegaanka Xaafuun.’’
Duufaantii Gati ee bishii nufeember ku dhufatay deegaanka Xaafuun ayaa sidoo kale jartay halkii wado ee tagi jirtay taas oo hakisay in gurmadkii deg-dega ahaa ee loo diray uu gaaro, maamulka iyo bulshada deegaanka ayaana hadda cabsi hor leh ka qaba in hadii roobab ay da’aan ay sii go’do wadadaasu, waakan gudoomiyaha Xafuun oo ka waramaya qorshahooda.
“Degmada waddada loo maro annaga maamulka degmada ahbaa sameeyay, haddana bacaad waaweyn baa fadhiya, qaybna waa go’antahay. Waxaan ku tashannay annagu tabar iyo dhaqaale inaan iska kaashano oo gacantayada aan ku qabsano, dowladdana aan garab ka helno.’’
Deegaanka Xaafuun ayaa ah Jaziirad la mood dhacda Bariga fog ee Soomaaliya, duufaantii ku dhufatay xeebaha Puntland sanadkii 2005 ayaan gebi ahaanba aastay magaaladii hore, waxaana 2006 la hirgeliyay magaalo kale oo cusub, xaafuun waxay leedahay hal waddo oo baddu ku hareeraysan tahay, taas ayaana dadka deegaanka welwel ku abuurta xili roobaadka iyo xiliyadda kale ee duufaanuhu dhacaan.